Niditra an-tsehatra ny mpiaro ny sisin-tany tamin’ny fanavotana ireo olona 14 nentiny. Namoy ny ainy anefa ny iray tamin’ireo tatsambo vokatry ny fisahotanana nandritry ny loza. Tsy nisy azo navotana intsony ireo entana izay notaterin’ity sambo ity.
MPITSOAKA VOLAN’NY MPIVARO-TENA
Nidoboka am-ponja eny Antanimora ilay lehilahy izay mpitsoaka volan’ny mpivaro-tena eny amin’ny manodidina ny 67ha. Ambanany antsy ny makorelina dia rahonany ho faty amin’izay izy tsy mandoa vola. Tonga nidododo teny amin’ny kaomisarian’ny 67ha ireo mpivaro-tena maro mba hametraka fitoriana. Rehefa hita izay nisy ilay lehilahy dia mbola nanampy tamin’ny fanenjehana azy koa ireo nosolokiany. Omaly no nentina teny amin’ny fampanoavana ny raharaha.
GABORARAKA ENY TSARASAOTRA
Manomboka feno gaboraraka eo amin'ny làlam-baovao Tsarasaotra mankeny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato amin'izao fotoana izao. Feno mpitarika sarety sy manangana trano kely manelingelina ny fifamoivoizana etsy sy eroa. Hoesorina izy ireo manomboka amin'ny alarobia ary ho hentitra ny fanaraha-maso izany hoy ny fanjakana. Raha tsy izao dia manenjana tanteraka dia ho lasa korontana indray no mitranga eny an-toerana.
Voasambotra ihany ilay lehilahy izay havanana amin’ny halatra fiara avy amin’ny fampiasana karapanondron’olon-kafa. Teny Masindray no hita ny fiara izay efa nesorina ny kojakoja maro toa ny motera ary ny ambiny sisa no namidy hita maso. Nisy olona nahatsikaritra ary nampandre ny zandary izay efa nikaroka azy. Izy mivady no voasambotra tamin’ity raharaha ity. Raha tsiahivina dia nahitany asa tao amin’ny orinasa etsy Talatamaty mba ho mpamily ilay kara-panondron’olona very. Nangalariny amin’izay ny fiara tao dia ilay olona indray no voatazona tany am-boalohany.
FAKANA AN-KERINY ANY AMBANIVOHITRA
Tonga tanteraka any ambanivohitra ny fanao ratsin’ny renivohim-paritany, indrindra fa eto Antananarivo sy Toamasina. Tany Amparafaravola dia nisy naka an-keriny tao an-tranony ny zanaky ny fianakaviana izay mba misy hatokona tao an-tanàna. Zazavavikely vao enin-taona izy io ary tsy namelan’ireo olon-dratsy raha tsy nanome 20 tapitrisa ariary azy ireo ny ray aman-dreniny izay vao navotsotra. Omaly no efa tafaverina ny zaza ary mandeha ny fanadihadiana rehetra momba ireo jiolahy.
NIREHITRA ILAY KAMIO
Tetsy Mahitsy , kamiao nitondra akoho izay saika hamidy aty an-drenivohitra no nivadika teo amin’ny lalam-pirenena ary nirehitra tanteraka. Tsy nisy ny aina nafoy fa kosa ny fiara dia tsy nisy noraisina intsony niaraka tamin’ireo akoho tao anatiny. Misesy tanteraka ny lozam-pifamoivoizana teny amin’ny lalam-pirenena hatramin’ny faran’ny herinandro. Teny amin’ny RN2 izay mifanandrify amin’ny Beforona-Moramanga dia olona telo no maty rehefa nivarina an-kady ny taxi-brousse iray ho any Toamasina.